Ukuphinda kuvalwe ngeThala leMigolide leSilivere ne-Ellicott Dredges
Ukuphinda kwenziwe kabusha kweMining Tailings (Igolide neSiliva) nge-Ellicott Dredges
I-DOMINICAN REPUBLIC - Ngokomlando, izinqubo zezokumbiwa phansi ezinamanani aphansi wokubuyisa ziye zabangela ukusikwa ngamanani abalulekile wokuphinda kutholakale. Ukukhishwa kwalokhu okuqukethwe kungatholakala kusetshenziswa ama-dredges.
Umsila udinga izinsiza ezimbalwa uma kuqhathaniswa nezimayini ezivamile. Isibonelo, i-dredge can - ngesinyathelo esisodwa - ikhiphe futhi ihambise leyo nto esikhungweni sokucubungula esisendaweni engamakhilomitha amaningi. Lokhu kunciphisa izindleko ezihlobene nemishini yokusebenza, abasebenzi, uphethiloli kanye nokugcinwa.
E-2012, u-Envirogold uthenge indawo eyodwa ejwayelekile ye-Ellicott 370 ukuze akhishwe umsila edamini awupomphele esakhiweni sawo sokusebenza.
I-dredge isetshenziselwe ukukhipha okokusebenza ekujuleni okungafika ku-8m bese ibapompa njenge-slurry ibanga eliphakathi kuka-500m no-800m nokuphakama okungama-11m. I-slurry ishaywa kusetshenziswa ipayipi le-HDPE elingu-10 intshi. I-dredge ikhiqiza futhi iphampu i-slurry ene-28% density. Imisila ine-Specific Gravity ebonakalayo ye-2.69 kanye nobuningi obumanzi obuningi be-1.71t / m3.
Ukuze ukhuphule umthamo wokukhiqiza futhi unikeze ukuguquguquka okuthe xaxa ekusebenzeni, u-Envirogold uthenge owesibili I-370 dredge kusuka ku-Ellicott e-2013.
Ukuze kulawulwe kangcono okokusebenza namanzi kusuka ekusebenzeni kokumba kabusha, idamu lihlukaniswe laba izigaba ezincane ezaziwa ngamachibi okubamba. Lapho isigaba sedamu sesenziwe amanzi, i-void eyenziwayo isetshenziselwa ukuphinda ibhale kabusha ukusika okucutshunguliwe okuvela kulesi sitshalo, ngaleyo ndlela kugcineke izinyathelo zedamu. Umsebenzi we-dredge usebenzisa amanzi akhona edamini. Amanzi abunjiwe asatshalaliswa kabusha abuyiselwa echibini lokwehlisa amanzi ngakho-ke awekho amanye amanzi adingekayo.
Ezinyangeni ezintathu zokuqala ze-2013, i-dredge yokuqala ikhishwe futhi yaphonsa cishe i-80,000 m3 of ukuhlangana kwesitshalo sokulungisa.
The I-Ellicott Series 370 dredge ejwayelekile idizili esika umsiki wokudonswa ngamandla nge-12 ″ x10 ″ futha kanye ne-440 HP yamandla afakiwe esewonke. Kuyinto enamandla kakhulu, ethembekile futhi ephathekayo ye-dredge ekahle yalolu hlobo lohlelo lokusebenza. Iyunithi yokuqala yanikezwa umsiki ojwayelekile, kuyilapho eyesibili yayihlanganisa nokusika amabhakede.
Imakethe kanye nezindlela zobuchwepheshe zenza ukucubungulwa kabusha kwemisila kukhange ngokwengeziwe. Ngenxa yomthamo wayo wokukhipha ngokwethembeka inani elikhulu lezinto ezibonakalayo futhi uzihambise ngaphandle kwesidingo sokubamba kabili, i-dredge yi-workhorse ekahle yale miklamo. Ngeminyaka engaphezu kwengu-125 yesipiliyoni sokuklama nokukhiqiza ikhwalithi ephezulu kakhulu, ama-dredges anamandla kakhulu futhi athembekile, i-Ellicott Dredges yisixazululo esifanele!